.သိပ်ပံဆေးဝါးမြားဖွငျ့ကုသရနျခကျခဲသူတို့အတှကျ“မီးကှငျးဂမုနျး” ဆေးတျောပငျ ပြောကျကငျးသောရောဂါမြား. – Askstyle
.သိပ်ပံဆေးဝါးမြားဖွငျ့ကုသရနျခကျခဲသူတို့အတှကျ“မီးကှငျးဂမုနျး” ဆေးတျောပငျ ပြောကျကငျးသောရောဂါမြား.
(၁)မကြာသေးမီကပင်သင်တန်းတက်ရောက်နေ သောမိတ်ဆွေတစ်ဦးနား ကိုက်သည်ဆို၍ အရွက်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးနား အတွင်း သို့သတ္တုရည် စိမ်းညှစ်ထည့်ပေးရာ အမှန်ပင်ပျောက် ကင်းသွားပါသည်။နားကိုက်နားရည်ယိုက အရွက်ရည်ကို ညှစ်၍နာအတွင်း အစက်ချရသည်။
(၂) ခေါင်းပေါ်မှဘောက်ထခြင်းကို မီးကွင်းဂမုန်းကို ထောင်း၍ သတ္တု ရည်ဖြင့်ခေါင်းလျော်ပါက ဘောက်မထဟုဆို၍ခေါင်းလျော်သည်လည်းရှိ သည်။ ဘောက်မထတော့ဟုဆိုသည်။
(၃) နှာခေါင်းသွေးလျံသူအား အရွက်အဆစ်များထုထောင်းကာ နှာခေါင်း
တွင်အုံပေးပါက နှာခေါင်းသွေးလျံခြင်း သက်သာပျောက်ကင်းသည်ကလက်
(၄)သွေးကင်ဆာရောဂါ ငွေကုန်ကြေးကျမခံနိုင်ဘဲအနောက်တိုင်းဆေးဖြင့် ကုသရန်အခက်အခဲရှိသူတို့ အရွက်နှင့်ပင်စည်ကို ကျေညက်အောင် ထောင်းပြီး ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းမျှ အရည်ရယူကာ ယင်းဆေး အရည် ကိုစတီးဇွန်း၊ ကြေးဇွန်းပေါ်တင်ပြီးအပူပေးကာ ခေတ္တ အအေးခံ သောက် ရသည် ဆိုပါသည်။
မီးကွင်းဂမုန်းဆေးရည်ကို နံနက်စာထမင်းပြီးတစ်ကြိမ်၊ညနေစာထမင်းစားပြီး တစ်ကြိမ် အစာစားပြီးချိန်နှင့််(၁)နာရီခြားကာ တစ်ဇွန်းသောက်ရသည် ဆိုပါသည်။
ထိုသို့တစ်ပတ်လျှင်သုံးရက် တစ်လခန့်သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် သွေးကင် ဆာ တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကင်းသက်သာသွားစေသည် ဟုညွန်းပါသည်။
မီးကွင်းဂမုန်းကိုးရွက်၊သံပုရာသီးတစ်စိတ်၊ဆားအနည်းငယ်ဖြင့် နေ့စဉ်သုံးခွက်တစ်ခွက် ပြုတ်ကျိုသောက်ပေးပါက ဆီးချိုနှင့်ဆီးကျောက်ရောဂါသိသာစွာ သက်သာပျောက်ကင်းခွင့်ရပါသည်။ မီးကွင်းဆေးရည်အရောင်မှာပန်းရောင်ခရမ်း ဖက်သို့ သန်းပါသည်။ ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့သောက်စသုံး
( ၆ )လိပ်ခေါင်း
အတွင်းလိပ်/အပြင်လိပ် သမားများအတွက် မီးကွင်းဂမုန်းအရွက်(၉)ရွက်ကို၊သကြားအနည်း ငယ်၊သံပုရာတစ်စိတ်၊ဆားသင့် ထည့်ပြီး သုံးခွက်တစ် ခွက်ပြုတ်ကျို သောက်ခြင်းဖြင့် လိပ်ခေါင်းရောဂါ သက်သာပျောက်ကင်း ကြောင်း တွဲဖက်ရန်က ခရုဖင်ရှည်ခွံအား ဆန်ဆေးရည်ဖြင့် သွေးကာ လိမ်းပေးရပါမည်။
အစာကြောင့်၊ရေကြောင့် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းများ ဖြင့် ၀မ်းကိုက်ခဲ့ ပါလျှင် ထန်းလျက်(၅)ခဲဖြင့် အရွက်ကို (၃)ခွက်(၁)ခွက်ပြုတ်ကျိုသောက် ပေးခြင်းနှင့် အရွက်ကို ပြုတ်၍သုပ်စားပါက အမှန်ပင် ၀မ်းကိုက်ပျောက်ကင်း ပါသည်။
ရုတ်တစ်ရပ် သွေးအန်ခြင်းကြုံပါက အရိုး/အရွက်ကို (၃)ခွက်(၁)ခွက်၊ ဒိုပါလာ (မှန်ညိုရောင်)သကြားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ကြွေဇွန်း (၁)ဇွန်း နေ့စဉ် (၃)ကြိမ်သောက်ရပါသည်။
အရွက်ကို သတ္တုရည်ညှစ်ပြီး ကြွေဇွန်း(၁)ဇွန်းသောက် ပေးခြင်း ဖြင့်ပျောက် ကင်းစေသည်။
(၁၀)မီးလောင်၊အပူလောင်မကြာခဏဖြစ် တတ်ကြပါသည်။ အရွက်နုကိုသကြား အနည်းငယ်ရောပြီးထုထောင်းချေမွ၍ လိမ်းပေးပါကသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ကိုယ်တိုင် လည်း ထိုနည်းအတိုင်းအသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
အရွက်/အရိုးထောင်းရရည်ဖြင့် သကြားအနည်း ငယ်ရောပြီး ဇွန်းသေး(၁) ဇွန်းခန့် တစ်နေ့(၃) ကြိမ်သောက်ပါက ချောင်းဆိုး၊ သလိပ်ကပ်ပျောက်ပါ သည်။
မီးကွင်းဂမုန်းပင်သည် မြစ်ချိုမျိုးရင်းဖြစ်ပါသည်။ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ Rhoeo
Discolor Hance ဖြစ်ပါသည်။
(၁)မကွာသေးမီကပငျသငျတနျးတကျရောကျနေ သောမိတျဆှတေဈဦးနား ကိုကျသညျဆို၍ အရှကျကိုရစေငျအောငျဆေးပွီးနား အတှငျး သို့သတ်တုရညျ စိမျးညှဈထညျ့ပေးရာ အမှနျပငျပြောကျ ကငျးသှားပါသညျ။နားကိုကျနားရညျယိုက အရှကျရညျကို ညှဈ၍နာအတှငျး အစကျခရြသညျ။
(၃) နှာခေါငျးသှေးလြံသူအား အရှကျအဆဈမြားထုထောငျးကာ နှာခေါငျး
တှငျအုံပေးပါက နှာခေါငျးသှေးလြံခွငျး သကျသာပြောကျကငျးသညျကလကျ
(၄)သှေးကငျဆာရောဂါ ငှကေုနျကွေးကမြခံနိုငျဘဲအနောကျတိုငျးဆေးဖွငျ့ ကုသရနျအခကျအခဲရှိသူတို့ အရှကျနှငျ့ပငျစညျကို ကညြေကျအောငျ ထောငျးပွီး ထမငျးစားဇှနျးတဈဇှနျးမြှ အရညျရယူကာ ယငျးဆေး အရညျ ကိုစတီးဇှနျး၊ ကွေးဇှနျးပျေါတငျပွီးအပူပေးကာ ခတ်ေတ အအေးခံ သောကျ ရသညျ ဆိုပါသညျ။
မီးကှငျးဂမုနျးဆေးရညျကို နံနကျစာထမငျးပွီးတဈကွိမျ၊ညနစောထမငျးစားပွီး တဈကွိမျ အစာစားပွီးခြိနျနှငျ့(၁)နာရီခွားကာ တဈဇှနျးသောကျရသညျ ဆိုပါသညျ။
ထိုသို့တဈပတျလြှငျသုံးရကျ တဈလခနျ့သောကျသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ သှေးကငျ ဆာ တဖွညျးဖွညျးပြောကျကငျးသကျသာသှားစသေညျ ဟုညှနျးပါသညျ။
မီးကှငျးဂမုနျးကိုးရှကျ၊သံပုရာသီးတဈစိတျ၊ဆားအနညျးငယျဖွငျ့ နစေ့ဉျသုံးခှကျတဈခှကျ ပွုတျကြိုသောကျပေးပါက ဆီးခြိုနှငျ့ဆီးကြောကျရောဂါသိသာစှာ သကျသာပြောကျကငျးခှငျ့ရပါသညျ။ မီးကှငျးဆေးရညျအရောငျမှာပနျးရောငျခရမျး ဖကျသို့ သနျးပါသညျ။ ကိုယျတိုငျလညျးလကျတှသေ့ောကျစသုံး
( ၆ )လိပျခေါငျး
အတှငျးလိပျ/အပွငျလိပျ သမားမြားအတှကျ မီးကှငျးဂမုနျးအရှကျ(၉)ရှကျကို၊သကွားအနညျး ငယျ၊သံပုရာတဈစိတျ၊ဆားသငျ့ ထညျ့ပွီး သုံးခှကျတဈ ခှကျပွုတျကြို သောကျခွငျးဖွငျ့ လိပျခေါငျးရောဂါ သကျသာပြောကျကငျး ကွောငျး တှဲဖကျရနျက ခရုဖငျရှညျခှံအား ဆနျဆေးရညျဖွငျ့ သှေးကာ လိမျးပေးရပါမညျ။
အစာကွောငျ့၊ရကွေောငျ့ အမြိုးမြိုးသောအကွောငျးမြား ဖွငျ့ ၀မျးကိုကျခဲ့ ပါလြှငျ ထနျးလကျြ(၅)ခဲဖွငျ့ အရှကျကို (၃)ခှကျ(၁)ခှကျပွုတျကြိုသောကျ ပေးခွငျးနှငျ့ အရှကျကို ပွုတျ၍သုပျစားပါက အမှနျပငျ ၀မျးကိုကျပြောကျကငျး ပါသညျ။
အရှကျကို သတ်တုရညျညှဈပွီး ကွှဇှေနျး(၁)ဇှနျးသောကျ ပေးခွငျး ဖွငျ့ပြောကျ ကငျးစသေညျ။
(၁၀)မီးလောငျ၊အပူလောငျမကွာခဏဖွဈ တတျကွပါသညျ။ အရှကျနုကိုသကွား အနညျးငယျရောပွီးထုထောငျးခမြှေ၍ လိမျးပေးပါကသကျသာပြောကျကငျးစပေါသညျ။ ကိုယျတိုငျ လညျး ထိုနညျးအတိုငျးအသုံးပွုခဲ့ပါသညျ။
မီးကှငျးဂမုနျးပငျသညျ မွဈခြိုမြိုးရငျးဖွဈပါသညျ။ရုက်ခဗဒေအမညျမှာ Rhoeo
Discolor Hance ဖွဈပါသညျ။